Kedu ihe dị mfe SEO Monthly Plan?
Nyocha njirimara ọchụchọ (ma ọ bụ SEO) abụghị ihe omume otu oge, mana usoro na-aga n'ihu na-achọ nlekota na ntụgharị oge niile. Ma ị masịrị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, engines ọchụchọ na-agbanwe agbanwe algọridim ha mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, Google, na-arụcha ọrụ ya mgbe nile iji nye ihe ndị kasị baa uru nye ndị nyocha.
N'ihi ya, ọbụna ndị nwe ụlọ ahịa ahụ bụ ndị maliterela weebụsaịtị ha ka nwere ọrụ ụfọdụ SEO na-arụ na mgbe niile. Cheta, iji nọgide na saịtị gị ruo ụbọchị na họọrọ ukwuu site Google ị ga-ebu otu ụyọkọ SEO mmezi ọrụ kwa ọnwa. Nke ahụ bụ mgbe usoro SEO na-abata - opana pill 40 mg.
Taa, anyị ga-ekpughere ihe nzuzo nile nke idebe akụ gị kacha mma maka ịnọgide na-enwe ihe ịga nke ọma na njụma ọchụchọ gị.Njikere? Ka anyị malite.
Ụdị Omenala nke Omenala gị
Otu n'ime ihe bụ isi mere ị ga - eji jiri akụ gị ruo oge bụ n'ihi na saịtị gị bụ ihe a na-akpọ mgbasa ozi maka azụmahịa gị nke nwere ike ejide ma na-elebara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ anya. Ndị a bụ ndụmọdụ dị mfe ị ga-agbaso iji nyere aka na ebe nrụọrụ weebụ gị na-aga n'ihu egwuregwu ahụ.
Echetara Okwu Ọhụrụ
Ikwesiri ịmepụta mkpụrụ okwu ọhụrụ kwa ọnwa. Nke mbụ, chọọ isiokwu mkpụmkpụ nke na-enwetaghị ihe karịrị ọchụchọ 500 kwa ọnwa. Mgbe ahụ, cheta isiokwu ahụ n'ime ọdịnaya ị mepụtara maka ọnwa ahụ. Ndị ọkachamara na elu mmiri na-atụ aro na ị na-eji Google Adwords keyword tool to find keywords that fit the criteria. Nakwa, echefula ịpị "kpọmkwem" iji mechie nsonaazụ ya. Dị mfe dị ka nke ahụ.
Ịmepụta Ọdịnaya Ọhụrụ na Bara Uru
Ozugbo i kpebiri na "isiokwu nke ọnwa ahụ," nzọụkwụ ọzọ bụ imepụta ọdịnaya nke na-elekwasị anya na isiokwu ndị ahụ. Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị ma ọ bụrụ na ị nweghị oge zuru ezu iji mepụta ọtụtụ ọdịnaya ọhụrụ n'ime ọnwa nyere - ị nwere ike ị na-akwụ ụgwọ freelancers ma ọ bụ ndị na-edepụta onwe ha ọrụ nke ga-arụ ọrụ ahụ maka gị. Ụzọ ọzọ si na ọnọdụ a bụ ịhọrọ akwụkwọ dị ugbu a maka mbipụta kwesịrị ekwesị ma dezie ya iji tinye isiokwu ahụ n'ime ọdịnaya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya ọhụụ mgbe niile, mee nke ahụ karị: dee ihe ọhụrụ, posts blog, akwụkwọ ọcha, nchọpụta ọmụmụ, blọọgụ ndị ọbịa ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ ga-eweta ụfọdụ okporo ụzọ ma bulie elu maka isiokwu ahụ.
Nye Multimedia a Chance
Ọ dịbeghị ama kọwaa vidiyo ma ọ bụ pọdkastị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịmalite ịmalite ụdị omume ahụ ngwa ngwa o kwere mee. Mepụta otu vidiyo omenala kwa ọnwa. Mgbe ị na-ede edemede vidio, jide n'aka na ọ gụnyere ma isiokwu ọhụrụ ma dị ugbu a. N'otu aka ahụ dị ka isiokwu, jide n'aka na ime ọdịnaya vidiyo dị mkpa ma na-akpali akpali maka onye na-ekiri - jiri ihe omume ugbu a, nzọụkwụ-site-nzọụkwụ, ntule na ndị ọzọ na-ewu ewu na usoro ị maara ga-enweta gị lekwasịrị anya na-ege ntị na-emekọ ihe.
Eziokwu bụ na Intaneti na - agbanwe mgbe niile ma na - agbanwe agbanwe - ya mere, akụ gị kwesịrị, kwa. Ịnyocha ihe gbasara SEO ndị e kwuru n'elu ga-akụziri gị ọtụtụ ihe gbasara ụdị ọrụ dị mma maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Jiri ihe omuma a meziwanye ihe di n'ime ya nke ichoro ichoputa onu ogugu maka onu ogugu. Idebe atụmatụ SEO nke a ga-enyere aka ịme ka ọdịnaya gị dị ọhụrụ ma dị elu mgbe ị na-eme ka njirimara onye ọrụ na ọdịnaya nke weebụsaịtị gị.